Conte Muxuu Ka Yiri Rajadooda UCL Ee Xagaaga Dambe %
Conte Muxuu Ka Yiri Rajadooda UCL Ee Xagaaga Dambe
Tababaraha kooxda kubada cagta Chelsea ninka lagu magacaabo Antonio Conte oo uwaramay warbaahinta ka hor ciyaarta ay Axada la balansan yihiin Tottenham ayaa sheegay in maqnaanshaha ama dheelista Harry Kane aysan wax walwal ah ku hayn.
Wuxuu carabka ku adkeeyay in Tottenham ay tahay koox wax wanaagsan rajayn karta ama qaban karta la’aanta Kane, isagoona faray ciyaartoydiisa inay si adag ay ushaqeeyaan mudada ay garoonka ku jiraan ciyaartaan xiisaha leh.
“Tottenham waxay tahay koox haysata ciyaartoy waa wayn oo wanaagsan, waxaana ay qaban kartaa wax walba oo fiican, waana mid aanan udhutineen maqnaanshaha hal ciyaaryahan sida Kane,” ayuu Conte usheegay Jaraa’idka.
“Waxaan dhamaanteena aan hubnaa in kulanka uu noo yahay mid muhiim ah, bartilmaameedkuuna waa inaan helno booskeena Champions League iyo inaan gaarnno final-ka FA Cup si aan ugu yaraan guul u awoodno.
“Kuwaas waa beegsideenu – Kulanka axadda waa mid muhiiim ah, maxaa yeelay hadii aan guuleysano waan dhawaaneynaa danka kale, waxaan sii wadaynaa joogista halkeena oo kuma dhawaan doono, waxaana noo harsanaan doona todoba kale.
“Marka tani waxay ka dhigan tahay in kulanka kadib ama wixii ka dambeeya ay noqon doonto wax aad u adag inaan usoo baxno ama aan helno booskeena Champions League,” ayuu cod dheer ku sheegay macalin Antonio Conte.
Isagoo sii hadalaya ayaa waxaa wax laga weydiiyay xaalada Goolhaye Thibaut Courtois, kaasoo tababarka kusoo laabtay isagoo dhaawac ah kadib markii uu kusoo daalay kulamadii saaxiibtinimo ee uu dheelay kulamadii lasoo dhaafay.
Hadaba Conte oo ka hadlay xaalka Courtois ayaa wuxuu yiri: “Waan hubin dooaa xaaladiisa waliba si aad u qoto dheer, waayo waa xidig muhiim ah, laakiin ma sheegi karo hadii uu dheeli karo, maxaa yeelay ma rabno inaan halis gelino.
Ugu dambeyn, Conte, ayaa wuxuu kaloo shaki badan uu geliyay daafacooda Andreas Christensen, kaasoo isana kusoo dhaawacmay kulamadii saaxiibtinimo ee uu udheelay wadankiisa Denmark, waxayna ka dhigan tahay inuu maqnaan karo.
Champions LeagueConteTottenham vs ChelseaUCL
Muxuu Ku Soo Dhaamaday Kullan Cayaaredkii U Dhaxeeyay Kooxaha LL.PP Jeenyo Iyo Madbacadd